बिष्णु रिमाल र महेश बस्नेतलाई मजदुर र युवा बिभागको जिम्मा लगाउन खोजेपछि माधब नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीको लफडा ! || सुनौलो नेपाल
बिष्णु रिमाल र महेश बस्नेतलाई मजदुर र युवा बिभागको जिम्मा लगाउन खोजेपछि माधब नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीको लफडा !
साउन २९ काठमाडौं स्कुल विभागसहित जनवर्गिय संगठनको नेतृत्व लगायत विषयमा विवाद कायमै भएपछि अन्ततः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक फेरि स्थगित भएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नु पर्ने देखिएपछि बैठक बिहीबारका लागि सरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आज बुधबार दिउँसोका लागि बोलाइएको बैठक अगाडि बिहान दुई अध्यक्षबीच भएको भेटर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक सार्न आग्रह गरेका थिए। दुवै अध्यक्षबीच सामान्य भेटर्वार्ता भयो प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले भने कुनै विषयमा औपचारिक सहमति भने भएको छैन। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रचण्डसँग बैठक सार्नका लागि प्रस्ताव गरेको बताए। बैठक बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्ने सहमति भएको छ।
उनका अनुसार स्कुल विभागकबाहेक अन्य विभागका विषयलाई लिएर पूर्वमाओवादी पक्षमा कु्नै विवाद रहेको छैन । उनले पूर्व एमालेभित्रको विवादले आजको बैठक सरको बताए। स्कुल विभागमा पर्वमाओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्वएमालेबाट ईश्वर पोखरेलले मुख्य रुपमा दावी गर्दै आएका छन्।
अन्य विभागमा पनि विवाद कायमै रहे पनि पूर्व एमालेका भागमा परेका मजदुर युवा र महिला विभाग तीव्र विवाद देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मजदूरमा विष्णु रिमाल युवामा महेश बस्नेत र महिलामा गोमा देवकोटाको नाम अगाडि सारेपछि विवाद सुरु भएको हो। यी तीनवटै नाममा माधव नेपाल पक्षधरले असहमति राखेका छन्। नेकपाका ३२ विभागमध्ये पूर्व एमालेको भागमा १८ र पूर्व माओवादीको भागमा १४ विभाग परेका छन्।